Zvinoreva mucherechedzo pabhodhoro remafuta rakakosha
Kazhinji, pane zviratidzo zvina zvakajairika pamabhodhoro emafuta akakwenenzverwa, saka ngatitarisei zvinoreva zvakasiyana zvavanomiririra. . 2. Aromatherapy Oiri Aromatherapy ...
Kubva kuvandudzwa kwemazuva ano kwemaindasitiri kwakatungamira mukushandiswa kwakazara kwegirazi, dema (tawny, girini, uye bhuruu) emabhodhoro egirazi akanyatso kuverengera akakosha ekurongedza mafuta Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji bhodhoro regirazi haichisiri kungovharirwa kune yakasviba bhuru, girini, uye bhuruu, semuenzaniso, chando ...
Tsiva aromatherapy rattan nguva dzose
Vhura iyo yekumisa bhodhoro, nyudza mumwe mugumo weiyo rattan mune aromatherapy mvura, ibudise kunze mushure mekuti rattan inyorove, wozoisa imwe mugumo muhombodo. Kana ikashandiswa munzvimbo diki (senge imba yekugezera), shoma tambo dze rattan dzinogona kuiswa kuti zviitike. kana chiri ...
Iyo nzira yekuwedzera zvinonhuwira kugirazi bhodhoro
Matanho ekuzadza bhodhoro rekare remafuta ekuzora nemafuta anotevera: a. Sukurudza bhodhoro remafuta nemvura. Wobva waisa madonhwe mashoma evhiniga nemvura muhombodo, wozvichenesa zvakakwana zvakare. Iyi nhanho ndeyekuuraya hutachiona. Iyo sirinji inofanirawo kucheneswa zvakakwana. & nb ...
COMI AROMA Reed Diffuser Matipi
Ndeapi maedus diffusers uye anoshanda sei? Tsanga diffusers dzakakurumbira zvakanyanya mukunhuhwirira kwemusha izvozvi. Izvo zviri nyore kushandisa; Tsanga dzinoiswa mubhodhoro regirazi kana girazi girazi remafuta anonhuwirira akapetana, tsanga dzinonyorova hwema uye dzinoburitsa kunhuwirira kunofadza pamusha pako - ...
Nei tichifanira kudzokorora mabhodhoro egirazi?
Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, mabhodhoro egirazi anoonekwa kwese kwese. Bhodhoro regirazi ishamwari huru yezvinwiwa, mishonga, zvizoro, nezvimwewo Aya mabhodhoro egirazi anogara achifungidzirwa akanakisa ekuputira zvinhu nekuda kwerunako rwavo rwakajeka, kugadzikana kwemakemikari, pasina kusvibiswa. kune zvirimo, ca ...
Sei Kuumbwa kwacho kwegirazi bhodhoro?
Nekukudziridzwa kwemabhodhoro ezvinonhuwira, kune akawanda uye akawedzera maumbirwo ebhodhoro evashandisi kusarudza kubva. Saka maumbirwo emabhodhoro aya aigadzirwa sei? Iyo yekuumba maitiro ebhodhoro regirazi inoteedzana yezviito (zvemagetsi, zvemagetsi, nezvimwewo) zvinodzokororwa mune yakapihwa programme sequen ...
Kushandiswa kwezuva nezuva kwemabhodhoro eTubhu
Mabhodhoro egirazi akapatsanurwa kuita mhando mbiri, rimwe ibhodhoro rakaumbwa uye rimwe ibhodhoro repombi. Mabhodhoro akaumbwa anowanzo shandiswa aromatherapy, pefiyumu, mafuta anokosha, nezvimwewo Chinhu chikuru mubhodhoro rakaumbwa nderekuti rinorema uye harisi nyore kutakura, nepo ...
Nzira yekusiyanisa pakati peyakaumbwa bhodhoro uye chubhu bhodhoro
Maitiro ekugadzira emabhodhoro egirazi akapatsanurwa kuita kuumbwa uye chubhu, saka ndeupi mutsauko mukuru uripo pakati pemabhodhoro akaumbwa nemabhodhoro ehubhu? Tichaongorora zvinotevera zvitatu zvinhu: 1. Chitarisiko chakasiyana, kuoneka kwebhodhoro rehubhu rinotaridzika kupenya, zvishoma zvirinani, ...
Nhoroondo yekugadzira Girazi
Nhoroondo yekugadzira magirazi inogona kuteverwa kuMesopotamia makore akapoteredza 3500 BC Uchapupu hwezvokuchera matongo hunoratidza kuti girazi rekutanga chairo rakagadzirwa kubva kumahombekombe ekuchamhembe kweSyria, Mesopotamia kana Egypt yekare Makirasi ekutanga egirazi anozivikanwa kubva muna 2000 BC uye anogona kunge akaitika netsaona. byproducer ...
Inoita sei matema mugirazi regirazi remafuta anonhuwira?
Mukugadzirwa kwegirazi rewaini bhodhoro, iyo bubble ndeimwe yematambudziko anogara achivhiringidza emabhizinesi ekugadzira. Kunyangwe iwo matema asingakanganise iwo mhando, iwo anonyanya kukanganisa aesthetics Kunyanya mune mamwe epamusoro-magumo emafuta emabhodhoro, mabhuru haatenderwe kuvepo. Uye ...
Maitiro ekusanganisa akakosha maoiri
Nzira yekusanganisa maoiri akakosha maoiri akakosha uye zvinhu zvisingachinjiki, saka chengetedzo inofanira kutorwa kana uchivagadzirira. Gadzirira 4 ~ 5 anodonhedza, shandisa akadonhedza akasiyana emafuta akasiyana akakosha. Izvo hazvikurudzirwe kugadzirisa zvakanyanya panguva imwechete kuti udzivise marara.Mhando dzeakakosha o ...
Nzira chaiyo yekuchengetera mafuta anokosha
1. Isa mafuta anokosha mumabhodhoro egirazi erima Zvakakosha maorivhi anogadzikana, asingatsike mwenje, uye anoparadza, saka anofanirwa kuchengetwa mumabhodhoro erima egirazi. Mabhodhoro epurasitiki haakwanise kushandiswa kuchengetera mafuta anokosha. Kunaka kwemafuta akakosha kuchakanganiswa kana makemikari akaumbwa epurasitiki ini ...
Iyo yekugadzira nzira yegirazi chubhu bhodhoro
Nhasi, tichakutora kuti unzwisise kugadzirwa kwegirazi chubhu bhodhoro: Kutanga, isa girazi chubhu yeimwe dhayamita inodiwa nemutengi mumushini. Iyo tenzi ichagadzirisa muchina zvakanaka uye woita girazi chubhu muyakagadzika kureba bhodhoro chimiro nebayonet kana scr ...
Chii chinorehwa nenhamba iri pasi pebhodhoro?
Isu tinowanzowana mavara kana maNhamba pazasi pemabhodhoro egirazi. Vatengi vazhinji vanobvunza zvinorehwa neNhamba idzi. Chii chavanomiririra? Kazhinji girazi bhodhoro rekugadzira michina ndeiyi: mutsetse muchina, muchina muchina, inverted muchina, maitiro ayo chishandiso chinogona kusanganiswa nemazhinji maseti eforoma ...
Kururamisa kunzwisisa kwemafuta akakosha
1. Ndeapi mafuta akakosha Ndeapi akakosha maoiri? Mune mazwi evatman: Anokosha mafuta imhando ye "mafuta", yakasarudzika mhando yemafuta. Chikonzero nei chakakosha ndechekuti inodhura uye yakapusa, nekuti iwo mafuta akakosha, mweya wechirimwa, uye chinhu chakaburitswa fr ...
Zvikonzero zvemitengo yakasiyana yemabhodhoro egirazi
Mabhodhoro egirazi akajairika ane muchetura here? Mabhodhoro egirazi anotengeswa neTaobao kwemadhora mashoma anoshandiswa kuchengeta chikafu. Zvakachengeteka here kugadzira waini kana vhiniga? Ichanyungudutsa zvine chepfu here? Nei mamwe mabhureki emabhodhoro egirazi achitengeswa zvakanyanya kudhura? Ko mabhodhoro egirazi akajairika haana kuchengetedzeka？ Gla ...
Kunhuwirira – kunhuwidza kuunza kuravira kwakanaka kwazvo kwauri
Pane chirevo chisingakanganwike muThe Song Dynasty literati's "Kurota Lianglu": "Pisa zvinonhuwira, nongedza tii, sungirira mifananidzo uye kuronga maruva, mana marudzi eanonyaradza, kwete imba yakaneta. Izvo zvinoreva ndezvekuti: wan ...
Global girazi Bhodhoro Musika Maonero
Tsvagurudzo neMarket zvakaburitsa girazi repasi rose girazi Bhokisi reMarket Outlook (2019-2027) Maererano neshumo, girazi repasirese rakaiswa mumusika wemabhodhoro, uyo akatipa madhora mabhiriyoni 63.77 muna 2019, anotarisirwa kusvika US $ 105.44 bhiriyoni muna 2027, aine remubatanidzwa wepagore kukura mwero we6,5% panguva t ...
Kuratidza inhanho yakakosha mukugadzirwa kwegirazi regirazi
Iko kunaka kwemabhodhoro egirazi kunoenderana zvakanyanya nekugadzirwa uye mhando yezvinhu, zvigadzirwa zvekugadzira, uye kugadzirwa kwevhu Kuratidza inhanho yakakosha mukugadzira. Kuratidza kunokanganisa zvakananga mutengo wekugadzira uye mhando yegirazi bhodhoro, saka rinofanira kutorwa zvakanyanya. 1. Th ...
Chii chinonzi frosting uye hollowing tekinoroji yemabhodhoro egirazi
Frosting tekinoroji ndeye kubatanidza dura rekunhonga mhinduro kana imwe girazi girazi glaze upfu kune girazi bhodhoro chigadzirwa, uye mushure mekupisa tembiricha kubheka pa580 ~ 600 ℃, girazi girazi glaze unhani yakanyungudutswa pamusoro pegirazi bhodhoro kuti riite kuoneka nzira yekushongedza ine akasiyana ...
Kugadzira uye kurongedza maitiro emabhodhoro egirazi
Pane nhanho nhanhatu kubva mukugadzira kusvika pakuisa girazi bhodhoro: Kubatira, Kukwiza, Kufuridza, Kuwedzera, Kuongorora, Kuisa. Batching Raw zvigadzirwa sejecha, silicone, uye dombo rerimu zvakasanganiswa uye zvinoramba zvichidyiswa muchoto. Zvinhu Zvinonyunguduka zvinopisa uye zvinonyungudika mukati mevira. Isu ...
Chakavanzika chidiki cheFlameless aromatherapy-Natural rattan VS Fiber rattan
Natural rattan: maRattan anowanzo ari masango ezvisikwa senge machena mazambiringa, miwillow / mizambiringa kana tsanga. Ose maviri magumo emiti yemizambiringa akazara ma pores, uye kureba uye kukamura kweumwe neumwe zvakati siyanei. Fiber rattan: Kune iyo rattan yakagadzirwa nefiber, iyo pores yeiyo rattan yakagovaniswa zvakaenzana t ...
Zvakanakira zvisina mwenje aromatherapy
Kune akawanda marudzi earomatherapy, isina mwenje aromatherapy, kenduru aromatherapy, mota aromatherapy, nezvimwewo mhando dzese dzearomatherapy dzine zvayakanakira nezvayakaipira. Muchikamu chino, tichakurukura zvakanakira isina mwenje aromatherapy. & ...